ကုသိုလ်အမျှရကြပါစေသော်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကုသိုလ်အမျှရကြပါစေသော်…	16
Posted by aye.kk on Jun 2, 2015 in Photography | 16 comments
တနင်္ဂနွေနေ့တန်းဆွမ်းကြွ ရောက်သော ရဟန်းသံဃာများနှင့် ကိုရင်များအား၊ ကြည်နှူးချမ်းမြေ့ဖွယ်ဖူးမျှော်တွေ့ရစဉ်။
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း၊အပါတ်စဉ် တန်းဆွမ်းအလှူခံ ထွက်ကြသည့်ရဟန်းသံဃာများနှင့်ကိုရင်များ(ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းကျောင်း-တာချီလိတ်)
ကုသိုလ်ယူရတာ ကြည်နှူးချမ်းမြေ့ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
သဒ္ဓါထက်သန်စွာဖြင့် ရဟန်းသံဃာများအား လောင်းလှူရန်အသင့်စောင့်ဆိုင်း နေ ကြသော ယောဂီ၊သီလရှင်အပါဝင်ဒကာ,ဒကါမများ။
. ချောလိုက်တာ။ မျက်နှာလေး အေးချမ်းပြီး ကျက်သရေလဲရှိတယ်။
သားရဟန်းကလဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။
တို့ အစ်မတော့ သားမျက်နှာ နဲ့ မျက်နှာပွင့်ပုံရမယ်။
အစ်မ ပေးဝေတဲ့ ကုသိုလ်ဒါန ကို သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ခေါ်ပါတယ်။
ဆထက်တန်ပိုး တိုးပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ။
အစ်မ ရဲ့ ပဒုမ္မာကြာပန်း က ကြာခွက်တွေ နဲ့ တင့်တယ်လှပါတယ်။
ဂမုန်းပန်း ကိုတော့ မမြင်ဖူးဘူး။
ပီတိ ဖြစ်စရာ အလှူအတွက် အမျှပေးတာကိုရော၊ စိတ်အေးချမ်းစရာ ပန်းလေးတွေကို မျှ တဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါရှင့်။
ဒါထက် အဲဒါဘယ်မှာလုပ်တဲ့ ပွဲလဲ အစ်မ။
aye.kk says: မလတ်ရဲ့ 
Alinsett @ Maung Thura says: ကြည်နူးစရာာာာာာ
သာဓု အခါခါ ခေါ်ဆိုလျှက်ပါဗျာာာာ
aye.kk says: Alinsett @ Maung Thura
Ma Ma says: သာဓု သာဓု သာဓု ပါ မအေးရေ။
ဆရာတော်ရဲ့ မျက်နှာဖူးရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။
မအေးနဲ့ သီလရှင်ဆရာလေးတို့လည်း မျက်နှာ ကြည်လင်နေတာပဲ။
ငွေတောင်ဦးကမ္မဌာန်းရိပ်သာအကြောင်းကို မအေးတင်ပေးလို့ မြင်နေကြားနေရတာ တကယ်အေးချမ်းတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမအေးရေ
Ma Ei says: အမအေး ပေးဝေသောအမျှကုသိုလ်များကို ရရှိ၍စိတ်အေးချမ်းရပါတယ်…
ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ဘုရားကလဲ ကြည်ညိုဖွယ်ရာကောင်းလိုက်တာ…
လှပစွာဖူးပွင့်နေသည့်ဂမုန်းပန်း။ ဆိုတာလေးက နေ၀န်းဂမုန်းပါ…နေ၀န်း လ၀န်း ဂမုန်း၂ မျိုးရှိတယ်..လ၀န်းဂမုန်းက ပွင့်ဖတ်ဝိုင်းပါတယ်…အိမ်မှာလဲရှိပါတယ်…
သစ်ခွပန်းလေး၊ကြာပန်းတွေရော အမအေးရော လှနေတယ်…
aye.kk says: Ma Ma
lu lu says: ကုသိုလ်မျှပေးတဲ့အတွက်
သာဓု အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်သွားပါကြောင်းးး
ခင်ဇော် says: သာဓု
aye.kk says: အောင်မိုးသူ,lu lu,ခင်ဇော်တို့အားလုံး
padonmar says: သာဓုသာဓု သာဓုပါ.
ငွေတောင်ဦးကျောင်းက ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ အဆက်အစပ်ရှိမယ်ထင်တယ်။
ကြာပန်းကို ပင့်ရိုက်ထားတာ လှလိုက်တာ။
​ဒေါ် လေး says: သာဓု _/\__သာဓု_/\__သာဓု_/\__ပါ
အန်တီအေးက ဖူးစာ ထဲမှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
လှတာမလှထက် ကျက်သရေ ရှိပြီး အေးချမ် တဲ့ မျက်နှာကို
aye.kk says: padonmar
ကြာပန်းမြင်ရင် ဒေါက်တာပဒုမ္မာကို ကိုသတိရမိတယ်။။
kai says: ယပ်တောင်တွေမှာ.. ဘာစာမှမပါတာမို့..အံသြမိ..